200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Maryan ma ahayn Masiixiyad!: Akhriso ujeedka laga lahaa Faafinta warkaas | Shabakada Warbaahinta Times
Maryan ma ahayn Masiixiyad!: Akhriso ujeedka laga lahaa Faafinta warkaas
Oct 29, 2017 - jawaab
Hurdo ayaan ka soo toosay. Sida caadada ii ah, haddii aan ammin haysto waxaan isha mariyaa wararka iyo baraha bulshda.
Farriimihii la iigu soo diray Facebook waxaan ka xushay hal mid oo widaaygeey ii so diray. Haddaan furey waaba dhiillo iyo dhimaal. Waxaan ugu warceliyey hadal nuxurkiisa aha: wayska qalin daarasho iyo ku dhibcabadsi.
Ka sokow, farriimaha waxaa ku jiray mid ay ii soo dirtay Anfac Cabdullaahi, oo la dhalatay Dottoressa Maryan, oo ku geeriyootay qarixii isgoyska azione 14/oktoobar.
Yaanan idin ka ka la dhaafine, qolyo Soomaali Kirishtan ah, ayaa qoraal ay ku qoreen bolog ay leeyihiin ku sheegteen, in Dottoressa Maryan Cabdullaahi, ay eheed Masiixiyad ka mid ah! MAGAG!
Marka aan arkay farriinta ay i la wadaagtay, in ay la mid tahay tan aan kor ku xusay, ayaan doorbiday, intii aan qoraal ku daalin lahaa, in aan toos u woco.
Salaan ka dib, ayaan waxoogaa is la qaadaadhignay arrinta, sababteeda iyo waxa ka dambayn kara.
Waxaan ku qanciyey, in maadaama Dottoressa Maryan, Eebbe ha u raxmadee, ay noqotay qofkii ugu magaca iyo muuqa dheeraa dadkii ku geeriyooday qaraxaa, uu ujeedkoodu yahay, in ay dunida u tusaan, in ay ka mid eheed iyaga!
Hadalkii haddii aan sii falanqaynnay aniga iyo Anfac, waxay ii sheegtay, in aabbahood Cabdullaahi, oo Ingiriiska uga yimid, in uu ka qaybgalo xafladda qalinjebinta Maryan, oo aan suuragalin, in aan is ku si u aragnay dhacdada been abuurka ah iyo ujeedka gurracan ee ay ka leeyihiin.
Qoys weli ay dareenkooda ku taagan tahay xanuunka waysmada gabadhooda, sidee ugu soo dhiirradeen, in ay xanuun kale ugu sii daraan? Waa midda aan qaadan waayey.
Waxaa la yaab leh, sida aan u noqonnay bulsho xumaha u faafisa si ka degdeg badan dab caws qabsaday.
Ka sii darane, waxaan Illaa shalay arkayey, dad ku doodaya; naga hubiya, wuxu amay sax yihiin iyo waa laga yaabaa, in ay run tahay! Yaah!
Maloxun wax ka daran ma jiraan, ku ma sii jirto marka ay qof ama qoys taabanayso dareenkooda, dadnimadiida iyo durriyaddooda.
Is ku aadka ugu adag, ee ay u sheegteen Masiixinnimada Maryan waa in warbaahinta dunidu si mug leh uga faalloodeen waxna uga qoreen, laga diyaarshay barnaamijyo maqal iyo muuqaal ah.
Waxyaabaha ay xiganayaan waxaa ugu weyn saddax arrin, oo xigmad ku fadhin:
– warbixinta Newyorka times, oo ay Dottoressa Maryan ku tilmaameen (xidigtii soo baxaysay) oo miyeysan ahayn; gabar hadda qalinjebin leheed, oo caafimaad baratay?.
– in ay eheed, qof gargaar iyo gacanqabad. Oo haddaa ma dhaqan Kiristanka keliya ay leeyihiinaa?.
– in ay qaraabo yihiin nin Shabaabku dileen, oo adeer u ahaa. Qof magacaa leh, Dottoressa Maryan xigto la ma ahan. Kaba muhimsane, xilliga uu dhintay, Maryan carruur ayey eheed, marka ma jiri karin duruuf ay is ku baran kareen. Beenlow qof dhintay ama qof maqan ayuu marqaati ka dhigtaa.
Dhibka diimaha ayey ka mid tahaye, marka ay isu badalaan ugaarsi ama urursi. Mid magaca Eebbe ayuu ku dilayaa, mid kalana magaca Eebbe ayuu uga been abuuranayaa, Eebbena beri ayuu ka yahay labadaba.
Waa labo dhimasho; dhimashadii ajalleed, ee qarax diimeedku sababay iyo dhamashada labaad been sheegadka diimeed ah, oo magacdil u ah Maryan.
Sidee ka la duwanaasho loo helayaa, haddiiba laga dhigay masabbid iyo been? Ka darane, sideen hafar iyo warxumo tashiil, uga hortagaynaa, haddii anagu aanba nahay kuwa faafinaya ama wareejinaya?.
Qarax, qaarijin iyo qaxar gelinta Aadane dhaqan ka gurracan ma lahan, haddana, dad Muslin ah qarribkood Eebbe ugu dhawaaw waa dhaqanxumo iyo dhib kale.
Magac, maal ama mansab ka raadi qof kale magacdilkii dhaqan ka xun ma jiro, haddana Eebbe ugu dhawaaw waa dhaqanxumo iyo dhib kale.
Waxaa qoray: Bashiir M. Xersi